Sintomy McDonnell Douglas DC10-30 Classic Liveries FSX & P3D - Freeware
Ity fonosana V3 an'ny fiaramanidina DC10 malaza sivily ity dia fanamboarana feno ilay fonosana V10 "tomdc2" lehibe. Ny singa rehetra amin'ny fonosana tany am-boalohany dia nohavaozina, ao anatin'izany ny firafitry ny fiaramanidina, tontonana 2D ary VC, feo, vokany ary indrindra indrindra, dinam-piaramanidina.
Ity famoriam-bola ity dia misy atiny tsara tarehy 12 avy amin'ireo kaompaniam-piaramanidina malaza indrindra tamin'ny taona 80, anisan'izany ny: Air Afrique, UTA, Garuda Indonesia, Swissair, Martinair Holland, Ghana Airways, Air New Zealand, Laker, JAT, American Airlines, Eastern Airlines ary Aeromexico .
Ny firaketana rehetra dia feno pitsopitsony amin'ny alfa vaovao sy ny fanatsarana ny jiro specular. Ny firafitra metaly rehetra dia nohatsaraina mba hanehoana taratry ny zava-misy sy taratra mazava. Ny firafitra rehetra dia DXT5.
Ity takelaka vaovao ity dia misy ireto gauge fanampiny ireto: FMC avy amin'i Garret Smith, TCAS avy amin'i Dietmar Loleit, ary VSpeed, Altitude Callout, Icons32, freins ary Cockpit feo nataon'i Philippe Marion. Ny ankamaroan'ireo refy ireo dia mampiasa ny FSX Fandrefesana feo XML nataon'i Doug Dawson.
Ampidiro ao koa ny rakitra feo tsara momba ny tontolo iainana mifototra amin'ny fonosana Benoit Plamondon (Aeromusica) CF6-50 V1, miaraka amin'ny fanavaozana nataon'i Philippe Marion.
Anisan'izany ny PaintKits: White sy Metal, feno ny sosona Alpha.
Voasedra FSX Fanafainganana (DX10) sy FSX Steam Edition (DX9). Miasa tsara koa miaraka Prepar3D ny kinova rehetra (XMLSound gauge natao mifanaraka amin'ny P3D v4 / 5 avy amin'i Rikoooo)
Downloads 4 590